कस्तो रहला तपाईको बिहिबारको भाग्य? कार्तिक २५ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् – Dainik Samchar
November 11, 2021 85
बृषः माया प्रेममा समय दिन नसक्दा भनेजस्तो नहुने सम्भावना छ । बिहानको समय उत्तम रहेकोले नयाँ काम गर्न सकिने समय रहेकोछ । समय मध्ययम रहेकोले कुनै व्यापार व्यावसायमा लगानि गर्नको लागि केहि दिन कुर्नुहोला । आर्थिक व्याबस्थापनका लागि गरिने कामहरु अन्तिम निष्कर्षमा नपुगि बिचमानै अवरुद्ध हुँन सक्छन् ध्यान दिनुहोला । हरेक क्षेत्रमा अवसरबादि हावि हुनाले कामहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । पढाई लेखाईमा एकरुपमा नहुँदा अरुभन्दा पछ परिनेछ ।
Prevविवाह गर्दै नायिका रेखा थापा, को हुन् दुलाहा ? भिडियो हेर्नुहोस्
Nextभाषा परीक्षामा उत्तिर्ण गरेर अमेरिका जाने तयारीमा रहेका भूपेन्द्रको स’पना अ’धुरै रह्यो